Ikhaya losapho elinesitayile kufutshane nePrague
Uyilo olutsha lwendlu yosapho enendawo yokuhlala, kodwa enobuntofontofo bale mihla kufutshane nePrague. Ifakwe kwigadi entle, kwilali encinci enechibi, indawo yegalufa, ilungele iintsapho ezihamba ngemoto. Idolophu enkulu ikumgama oziikhilomitha ezingama-25, ke imizuzu engama-20 ngemoto okanye imizuzu engama-35 ngebhasi.
Indlu entle yoyilo losapho emaphandleni kufutshane nePrague, enendawo evulekileyo ngaphezulu kwemigangatho emibini, imiqadi yomthi kunye neendonga zezitena. Igumbi eliphambili elinendawo yomlilo kunye nemibono emihle yegadi ebiyelwe ngodonga. I-Predboj ayikho kude nePrague, i-25 km ukusuka kumbindi wedolophu, indawo yokumisa ibhasi i-100 m ukusuka kwindlu. Indawo yokuphumla yegalufa ikwimitha nje eyi-200 ukusuka endlwini, kukho ikofu enesitayile kunye nendawo yokutyela ebalaseleyo enethafa elijonge igadi enamachibi amabini. Enye i-pub yelizwe enendawo yokuhlala egadini ngokuthe ngqo ngaphesheya kwesitrato, ukuba ufuna ukuva umoya wokwenyani we-Czech pub, vele ungene - U SOBODŮ !
Indawo yokuphumla yegalufa enemingxuma elithoba yi-200 yeemitha ukusuka endlwini, kukho ivenkile yekofu enesitayile kunye nevenkile yokutyela ebalaseleyo enethafa elijonge kumachibi amabini amancinci.
Safudukela embindini wePrague, kodwa ukuba uza kufuna uncedo, siyakuqhagamshelana.